Israel Sang Update (Jerusalem Live Blog Pan Hi) ~ Thu Tatuam (Siyin News)
Israel Sang Update (Jerusalem Live Blog Pan Hi)
Monday, July 21, 2014 Israel Taw Kisai No comments
11:50 p.m. ၂၄ နာရီအတွင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားများ အမည် စာရင်း ထွက်လာ ဗိုလ်မူးတစ်ဦး ၊ နှင့် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်တစ်ဦးပါဝင်
11:49 p.m. Sderot အရေးပေါ်ဥသြ
10:11 p.m. Palestinian ဒေသအာဏာပိုင်သမတ Mahmoud Abbas ပါတီးအားလုံးပေါင်းပြီး ဂါဇာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြော ၊ Egyptian ရဲ့ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေမူ့တွေဟာ မှန်ကန်ကြောင်းပြော ပါလက်စတိုင်းတွေဒါဇင်ချီ သေရကြောင်း ရူတ်ချပါကြောင်း
9:30 p.m. US President Barack Obama မှ ဝန်ကြီးအား Netanyahu အား ဂါဇာပြည်သူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းရကြောင်း ပြော
9:10 p.m. သေဆုံးသွားတဲ့ စစ်သား ၁၃ ယောက်ထဲက ၂ ယောက်ဟာ အမေရိကန်က ဖြစ်တယ်
8:50 p.m. Ashdod လေကြောင်းအချက်ပေးသံထွက်
8:32 p.m. Ya'alon: စစ်ပွဲက ကြာရှည်ပါမယ် Shejaiya ဒေသမှာ မြေအောက်နေရာတွေရှိပါတယ်
8:30 p.m. ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Moshe Ya'alon ကသတင်းစာရှင်းပွဲတွင် : Hamas အနေနဲ့ Gaza နေပြည်သူတွေအတွက် တာဝန်ရှပါတယ်
8:25 p.m. Netanyahu: Israel ငြိမ်သက်ဖို့ တပ်ဖွဲတွေ ဖြန့်ကျက်ရပါမယ် ၊ အစကတည်းက ရေရှည်စစ်ဆင်မူဆိုတာ ကြိုသိပါတယ်
8:23 p.m. Netanyahu: ကျနော်တို့ ဖက်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့မူရနေပြီး ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ အရေးတွေရှိကြောင်း
Hamas တွေမှာက Israel ကိုတိုက်ဖို့အရေးက: မြေအောက်ခေါင်းတူး ပြီး ဒုံးနဲ့ ပစ်မယ်
ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ Gaza ကနေပစ်ပစ်နေတဲ့ စနစ်ကို ဖျက်ဆီးဆီးဖို့က Gaza ဝင်ပြီး မြေအောက် ခေါင်းတွေ ရှင်းလင်းဖို့ ဖြစ်တယ်
8:22 p.m. Netanyahu: အခုတစ်ခေါက် တွေ့ရတဲ့ မြေအောက် လိုင်ခေါင်းတွေဟာ အယင်ကထက် ပိုကြီးကြောင်း မူကြိုကျောင်းတွေ၊ သူတို့ ထမင်းစားဆောင် တွေအောက်မှာ ဆောက်နေ တော့ ရလဒ်က အဲဒီမှာ သူတို့ သင်္ချိုင်းကိုသူတို့ဆောက်နေတာပါ
8:19 p.m. Netanyahu: စစ်သားများ အိမ်ပြန်လာရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးကြောင်း
8:17 p.m. Prime Minister Binyamin Netanyahu သတင်းစာရှင်းပွဲ ကျဆုံးသွားတဲ့ ကျနော်တို့ရဲဘော်မိသားစုဝင်တွေကိုအားပေးကြောင်း၊ သူတို့အတွက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဝမ်းနဲ့ခြင်းစစ်ပွဲပြီး နောက်ထပ် စစ်ပွဲ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း
7:56 p.m. Ashkelon Coast Regional Council ကနေ အရေးပေါ်ဥသြဆွဲနေပါတယ်
7:40 p.m. Israel ရဲ့ Sderot တောင်ဖက်မှာ အရေးပေါ်ဥသြဆွဲနေပါတယ်
7:00 p.m. တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ရန်သူရဲ့မြေအောက်လိုင်ခေါင်း ၆ ခုကို တိုက်ခိုက်ကြောင်း ၃ခုဆိုယင် Israel တွေနေတဲ့ဖက်နားကို ရောက်နေပါပြီး အထဲမှာ ပေါက်ကွဲအားကောင်းတဲ့ အရာတွေရှပါတယ်၊ အရှဆုံး လိုင်ခေါင်းက Israel ဖက်ခြမ်း ၁.၂ ကီလိုမီတာထဲတောင်ကျွံနေတယ်လို Israel တပ်မတော်က ဆိုပါတယ်
6:57 p.m. တပ်မတော် ဦးစီး Benny Gantz က ဒီကနေ့ညနေ သတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာ "ဒီ ၂၄ နာရီအတွင်း ခါတိုင်းဖြစ်နေတာထက် ပိုပြီး သေကျေဆုံးရူံးမူ့တွေ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ပါ၊ ကျနော် ကျနော့်ရဲဘော် တွေလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာ အများကြီး ဂုဏ်ယူပါတယ် ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် မပြည့်စုံမချင်း နားမှာ မဟုတ်ပါဘူး" လို့ပြောပါတယ်
6:32 p.m. Sha'ar Hanegev Regional Council မှအရေးပေါ်ဥသြဆွဲ
6:25 p.m. Israel ရဲ့တပ်မ Golani မှ စစ်သား ၁၃ ဦး စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေတိုက်ပွဲမှ ကျဆုံးသွားကြောင်း Israel ကြေညာ
6: 02 p.m. Gaza မှ Israel တောင်ဖက် Eshkol Regional Council ကို ဒုံးနှစ်လုံးနဲ့ ပစ်ခတ် ပါတယ် ထိခိုက်မူမရှိ
5:33 p.m. Ashkelon Coast Council တွင် ဥသြသံဆွဲ
5:22 p.m. Beersheba ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ
5:20 p.m. ရာချီသော Israel များ က ကျဆုံးသွားသော Israel တပ်မှ Sgt. Eitan Barak, 20 အတွက် စစ်သင်္ချိုင်းတွင် ငိုကြွေး
5:09 p.m. Gaza မှ ပစ်ခတ်သော ဒုံးလေးလုံးအား Israel ဖက်မှဖျက်ဆီး
4:56 p.m. အာရပ်အဖွဲချုပ်က တနင်္ဂနွေနေ့တိုက်ခိုက်မူတွင် ပါလက်စတိုင်မှ ၆၀ ဦး သေဆုံး Israel အား စစ် ရာဇဝတ်ကျူးလွန်သူဟုပြော
4:51 p.m. US Secretary of State John Kerry က FOX News တွင် Hamas တွေအတွက် ဆက်လက် အသက်ရှင်ချင်သေးယင် အပစ်ခတ်ရပ်တာ လက်ခံဖို့ လိုတယ် ဟုပြော
4:36 p.m. လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသော အား ဖြင့် 5:30 p.m. ဂါဇာ Shejaia district ဒေသတွင် ပစ်ခတ်မှ ရပ်
3:45 p.m. မြေအောက်လိုင်ခေါင်း မှ ခေါင်းပြူထွက်လာသော Hamas နှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရ Hamas ၂၂ ဦး ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး
3:39 p.m. Eshkol သို့ Hamas မှ ဒုံး နှစ်စင်ဖြင့်ပစ်ခတ် သေဆုံးသူမရှိ
2:34 p.m. ဒုံးကျည်ဖြင့် Israel ဖက် Eshkol Regional Council အား ပစ်ခတ်
2:30 p.m. Shejaiai တွင် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်
1:54 p.m. မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ရာတွင် ဟားမာစ် ၁၃၀ ဦး သတ်ဖြတ်နိုင်ပြီး ၈၀၀ ဒဏ်ရာရစေကာ၊ မြေအောက်လိုင်ခေါင်း ဆက် ၃၄ ခုနှင့် လိုင်ခေါင်း ၁၄ ခု အား ဖျတ်ဆီးနိုင်ကြောင်း Israel ကြေညာ
1:44 p.m. Sha'ar Hanegev သို့ Hamas မှ ဒုံးဖြင့် ပစ်ခတ်
1:34 p.m. Israel နှင့် Hamas မှ ၂ နာရီအတွင် သတ်မှတ် နေအချို့တွင် ပစ်ခတ်ခြင်း ရပ်ရန် သဘောတူ
12:48 p.m. ဒဏ်ရာရသော Israel စစ်သား ၁၅ ဦး ဆေးရုံသို့ပိုဆောင် လေးဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်
12:27 p.m. Erez ဒေသတွင် လယ်ကွင်း ဆေးရုံ တစ်ခုဆောက်လုပ်ကာ ဒဏ်ရာရ Palestine အမျိုးသမီး နှင့် ကလေးသူများအတွက်နှင့် မီးဖွားများအတွက် ည ၈း၀၀ မှ စတင်ကာ ကုသပေးမည်ဟု Israel ကြေညာ
12:03 p.m. Israel Eshkol ဒေသသို့ ဒုံး သုံးလုံး နှင့် Sha'ar Hanegev Regional Council အား ဒုံးတစ်လုံးဖြင့် Hamas မှ ပစ်ခတ်
12:00 a.m. Beersheba အရေးပေါ်ဥသြဆွဲ
11:45 a.m. Eshkol နှင့် Sha'ar Hanegev Regional Councils တွင် အရေးပေါ်ဥသြဆွဲ
11:43 a.m. ကြက်ခြေနီမှ တောင်းဆိုမူကြောင့် Hamas မှ ၂ နာရီအတွင်းပစ်ခတ်မူရပ်မည်ပြော
11:30 a.m. Eshkol Regional Council အဆောက်အဦအား Hamas မှ ပစ်ခတ် သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူမရှိ
10:50 a.m. Netivot သို့ Hamas မှ ပစ်ခတ်သော ဒုံး အား Iron Dome မှ ပြန်လည် ပစ်ခတ် ဖျက်ဆီး
10:47 a.m. Rishon Lezion နှင့် Ness Ziona တွင် အရေးပေါ်ဥသြဆွဲ
10:42 a.m. Iron Dome မှ Ashkelon Coast Regional Council သို့ ပစ်ခတ်သော ဒုံးအား ပြန်လည် ဖျက်ဆီး
10:42 a.m. Ashkelon Coast Regional Council အနီး ဒုံးကျရောက်ပေါက်ကွဲ
10:35 a.m. Iron Dome မှ Sdot Negev Regional Council သို့ Hamas မှ ပစ်ခတ်သော ဒုံးများ အား ပြန်လည် ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီး
10:34 a.m. Israel Kibbutz Sha'ar Hanegev သို့ Hamas ကပစ်ခတ် လူသူကင်းမဲရာတွင်ပေါက်ကွဲ
10:25 a.m. Rocket s Sha'ar Hanegev Regional Council တွင် အရေးပေါ်ဥသြဆွဲ
10:15 a.m. Netivot ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ
10:00 a.m. Hamas အယောက် ၂၀ အား Israel ခြေလျှင်တပ်ဖွဲ့မှ ရှင်းလင်း၊ လူအများအပြား Gaza မှ ဘေးကင်းသို့ ပြေး
9:48 a.m. Israel ဖက်မှ လေးဦး ဒဏ်ရာရ နှစ်ဦး ပြင်းထန်
9:25 a.m. Beersheba ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ
9:22 a.m. Ashkelon ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ
9:19 a.m. Beerheba, နှင် Ashkelon ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ Hamas မှ ပစ်ခတ်သော ဒုံး Ashkelon လူသူကင်းသော နေရာသို့ နေရာတွင် ပေါက်ကွဲ
9:15 a.m. Ashkelon သို့ပစ်ခတ်သော ဒုံးအား Israel မှ ပစ်ခတ် ဖျက်ဆီး
8:50 a.m. Israel Beersheba ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ ပြီး နောက်ဆယ်မိနစ်တွင် ဒုံးကျည်တစ်လုံးကျရောက်ပေါက်ကွဲ
8:34 a.m. စနေနေ့ တစ်ညလုံးတိုက်ပွဲတွင် Israel တပ်ဖွဲ့ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရကြောင်း ကြေညာ
8:20 a.m. Shaar Hanegev ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ ပြီး ဒုံး ၉လုံးကျလာ
7:45 a.m. Hamas တို့၏ ၁၄ ခုမြောက် မြေအောက်လိုင်ခေါင်း တွေ့ရှိ
7:40 a.m. Beersheba ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ
4:00 a.m. Israel စစ်သား ငါးဦး ဒဏ်ရာရ တစ်ဦး ပြင်းထန်
3:16 a.m. Eshkol နှင့်Ashkelon ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ
2:00 a.m. အဝင်ပေါက် ပွင့်နေသော မြေအောက်လိုင်ခေါင်း သို့ Israel တပ်များ ဝင်ရောက်
12:05 a.m. Eshkol ဒေသတွင် ဥသြသံဆွဲ
Sizaang Thu (819)
Blog Archive January (8) December (21) November (17) October (6) September (6) August (18) July (6) June (15) May (14) April (11) March (22) February (38) January (49) December (37) November (18) October (35) September (29) August (38) July (43) June (49) May (21) April (19) March (23) February (22) January (37) December (39) November (30) October (48) September (54) August (66) July (99) June (81) May (70) April (87) March (78) February (83) January (105) December (83) November (72) October (85) September (52) August (78) July (105) June (123) May (112) April (119) March (99) February (74) January (89) December (97) November (104) October (117) September (114) August (141) July (156) June (106) May (127) April (100) March (126) February (102) January (106) December (122) November (109) October (132) September (103) August (139) July (167) June (174) May (174) April (194) March (27)